IGoldenlaser igxile ekuboneleleni ngezisombululo ezikrelekrele, zedijithali, kunye nezizenzekelayo.
Umenzi weenkqubo ze-laser zokusika, ukukrola kunye nokumakishwa.Ingcaphephe kwiUmatshini wokusika we-CO2 laser,Umatshini we-laser weGalvokwayeumatshini wokusika we-digital laser die.
Ukusukela ekuqaleni kokubonisana novavanyo lwesicelo kunye nezixhobo zakho eziyilelweyo kwishishini elithile ukuya kuqeqesho lwabasebenzisi kunye nenkonzo yehlabathi jikelele-iGoldenlaser ibonelela ngezisombululo zelaser ezibanzi, hayi umatshini omnye kuphela!
I-CO2 LASER CUTTER
UMBONO LASER CUTTER
Inombolo yoMzekelo: JMCCJG / JYCCJG Series
Isantya esiphezulu soShishino lokusika iLaphu yeLaphu yeLaphu
Olu chungechunge lwe-CO2 umatshini wokusika we-laser we-flatbed yenzelwe imiqulu ebanzi yelaphu kunye nezixhobo ezithambileyo ngokuzenzekelayo kwaye ngokuqhubekayo ukusika.Iqhutywa yigiya kunye ne-rack ene-servo motor, i-laser cutter ibonelela ngesantya esiphezulu sokusika kunye nokukhawulezisa.
Inombolo yoMzekelo: JMCCJG-350400LD
Izixhobo ezichanekileyo eziphezulu kunye ne-rack eqhutywayo.Isantya sokusika ukuya kuthi ga kwi-1200mm / s.CO2 RF laser 150W ukuba 800W.Inkqubo yokuhambisa ivacuum.I-Auto-feeder kunye nokulungiswa koxinzelelo.Ilungele ukusika ilaphu lokucoca, i-filter mats, i-polyester, i-PP, i-fiberglass, i-PTFE kunye neempahla zamashishini.
Inombolo yoMzekelo: JMCZJJG(3D)-250300LD
Umatshini wokusika iLaser yoMbhobho woMoya welaphu
Indibaniselwano yefomathi enkulu i-X, i-Y axis laser cutting (ukunciphisa) kunye nesantya esiphezulu se-Galvo laser perforating (imingxuma yokusika i-laser).Yenzelwe ukusika umbhobho wokungenisa umoya welaphu (i-sock duct, i-sox duct, i-sox ye-sox, i-duct sock, i-textile air duct, i-air sock, i-sox yomoya)
Inombolo yoMzekelo: JYCCJG-1601000LD
Umatshini wokusika weLaser weTheyibhile omde
Ibhedi yokusika eyongezelelweyo ende- OkukhethekileyoIimitha ezi-6, i-10 yeemitha ukuya kwi-13 yeemithaIisayizi zebhedi zezixhobo ezinde ezongezelelweyo, njengentente, ilaphu leseyile, iparashute, iparaglider, i-canopy, i-marquee, i-awning, i-parasail, i-sunshade, iikhaphethi zokubhabha ...
Inombolo yoMzekelo: JMCZJJG(3D)170200LD
I-Galvo kunye ne-Gantry yeLaser yokuCwatha uMshini wokusika i-Textile, i-Leather
Le nkqubo ye-laser idibanisa i-galvanometer kunye ne-XY gantry.IGalvo ibonelela ngesantya esiphezulu sokukrola, ukukrolwa, ukugqobhoza kunye nokusikwa kwezinto ezincinci.I-XY Gantry ivumela ukusetyenzwa kweprofayile enkulu kunye nesitokhwe esityebileyo.
Inombolo yoMzekelo: ZJJF(3D)-160LD
Roll to Rolling Flying Fabric Laser Engraving Machine
Inkqubo ye-Galvo eguqukayo ye-3D, igqibezela ukumakisha okukroliweyo okuqhubekayo kwinyathelo elinye.Itekhnoloji yelaser "ekubhabha".Ifanelekile kwilaphu lefomati enkulu, i-textile, isikhumba, i-denim, i-EVA engraving.
Inombolo yoMzekelo: ZJ(3D)-9045TB
Isantya esiphezulu seGalvo Laser yokuBeka umatshini weSihlangu seLeather
CO2 RF intsimbi laser 150W 300W 600W.Inkqubo yolawulo ye-galvanometer eguqukayo ye-3D.Okuzenzekelayo phezulu nasezantsi umgca we-Z.I-automatic shuttle zinc-iron alloy honeycomb itafile yokusebenza.
Inombolo yoMzekelo: ZJ(3D)-15050LD
Umatshini wokusika weGalvo Laser weSandpaper Abrasive Discs
Iinkqubo zokuskena zegalvanometer yendawo enkulu.Imithombo ye-laser emininzi yokwandisa imveliso.Ukutya okuzenzekelayo kunye nokubuyisela umva - umthumeli...
Inombolo yoMzekelo: CJGV-160130LD
I-Sublimation Fabric Laser Cutter ye-Sportswear
Umbono we-laser ulungele ukusika amalaphu elaphu elilaphu angaphantsi koshicilelo lwedijithali azo zonke iimilo kunye nobukhulu.Iikhamera ziskena ilaphu, zibhaqe kwaye ziqaphele i-contour eprintiweyo, okanye zichole kumanqaku obhaliso ashicilelweyo kwaye zisike uyilo olukhethiweyo ngesantya kunye nokuchaneka.
Inombolo yoMzekelo: QZDXBJGHY-160100LDII
Umatshini wokusika weLaser oZimeleyo weKamera eMabini amabini
Inkqubo yokusika i-laser yeentloko ezimbini ezizimeleyo idityaniswe ngokugqibeleleyo kunye nenkqubo yombono okrelekrele, kwaye iphuculwe ngakumbi kwiimfuno zokusetyenzwa kwemizobo eprintiweyo.
Inombolo yoMzekelo: I-MZDJG-160100LD
Amanqaku obhaliso oluchanekileyo oluphezulu lokubeka kunye nembuyekezo yokuguqulwa okukrelekrele ngokuchanekileyo ukusika i-laser yedayi sublimation iilogo eziprintiweyo, iileta kunye namanani.
Inombolo yoMzekelo: CJGV-320400LD
Umsiki weLaser yeFomathi ebanzi yeeFlegi ezinkulu, iiBhana, iMiqondiso eSoft
Umbono omkhulu welaser cutter yenzelwe ngokukhethekileyo ishishini loshicilelo lwedijithali - livelisa amandla angenakuthelekiswa nanto okugqiba ifomathi ebanzi eprintwe ngokwedijithali okanye imizobo yelaphu edayiweyo, iibhena kunye neempawu ezithambileyo.
Inombolo yoMzekelo: LC350
High-speed ezimbini intloko laser die-ukusika inkqubo.Uyilo lwemodyuli kunye nemisebenzi emininzi yoyilo-kwinye.Ukusebenzisa i-CO2, i-IR okanye ukuhanjiswa kwe-UV ukubonelela ngamagunya ahlukeneyo kunye namaza obude.Ifanelekile kwi-roll to roll ukusika iifilimu eziphezulu zokusebenza, iiteyiphu kunye ne-adhesives.
Inombolo yoMzekelo: LC-350
Roll ukuba Roll Label Laser Die Cutting Machine
Ukusika i-laser e-Dieless kunye nesisombululo sokuguqula ukugqiba iilebhile.Umfundi wekhowudi ye-QR uxhasa utshintsho oluzenzekelayo kubhabho.IsiKhokelo seWebhu senza ukukhulula kunye nokubuyisela umva kuchaneke ngakumbi.
Inombolo yoMzekelo: LC-230
I-LC230 ngumatshini wokugqibezela i-laser compact, uqoqosho kunye nedijithali ngokupheleleyo kunye nobukhulu bewebhu ububanzi obuyi-230mm.Lolona khetho lubalaseleyo kwimitsi emifutshane yedijithali.Ukubonelela ngotshintsho lwe-zero ngokuhamba kwexesha kwaye akukho xabiso leplate yokufa.
Siyingcali yokusika i-laser kunye nezisombululo zokukrola uluhlu olubanzi lwezicelo.Nazi ezinye zezicelo ezimbalwa esihlala sisebenza ngazo.
Khetha ishishini lakho: ezona zisombululo zifanelekileyo zelaser ezilungele wena.
Ngobuchule obunamandla obutsha betekhnoloji, iGolden Laser iyakwazi ukubonelela ngoomatshini belaser obulungiselelweyo kunye nezisombululo, yenza imveliso yakho isebenze ngakumbi kwaye ibe nengeniso.
Njengokwenza i-epoch-making innovation yetekhnoloji, i-laser iphuhla ngeenzuzo ezingenakuthelekiswa nanto, ithatha indawo yeenkqubo ezininzi zemveli.
Laser Systems Incwadana
Laser Systems Incwadi Yomsebenzisi
Malunga neGolden Laser (ifayile yePDF)
Hlala ubonelela ngenkxaso yenkonzo.Iinjineli ezifumanekayo kwinkonzo yoomatshini phesheya ngenkonzo yofakelo, inkonzo yoqeqesho kunye nenkonzo yokulungisa.
Jonga apha ngolwazi malunga neshishini elifanelekileyo kunye neendaba zethu zamva nje kunye neziganeko.
Ukusika i-Laser ye-carbon fiber kunokwenziwa nge-CO2 laser, esebenzisa amandla amancinci kodwa inika iziphumo eziphezulu.Itekhnoloji yokucubungula i-laser yokusika i-carbon fiber ikwanceda ekunciphiseni amaxabiso e-scrap xa kuthelekiswa nezinye iindlela zokuvelisa…
Xa kuziwa ekudaleni iimaski ze-sublimation yesiko, i-laser cutter inokuba yinxalenye yokwenza ezi ziqwenga zinesitayile.Nazi ezinye iimbono malunga nendlela onokuyisebenzisa ngayo le teknoloji intsha…
Ukusika Ilaphu lesihluzi ngeLaser kuMgangatho wePremium
Ukwenziwa kweNgcaciso yoMveliso ? Ukulandela okugqwesileyo
Ukukwazi ukwenza ngokwezifiso
Izisombululo zeLaser uMboneleli oKhokelayo
Ngamava angama-20 eminyaka kushishino lwelaser, ngokuqhubekayo ukuphuhlisa nokusebenzisa itekhnoloji ephucukileyo, iGoldenlaser ibe ngumvelisi ophambili koomatshini belaser abanobuchule obuphucukileyo bokwenza ngokwezifiso.
> Phonononga oomatshini belaser
IGoldenlaser ikunika izisombululo zelaser zobuchwephesha kwishishini lakho lesicelo-ukukunceda wonyuse imveliso, wenze lula inkqubo yokusetyenzwa kunye nokwenza ingeniso engakumbi.
> Phonononga izisombululo zelaser
Kwimarike yaphesheya kweelwandle, iGoldenlaser iseke inethiwekhi yokuthengisa eqolileyo kumazwe angaphezu kwe-100 kunye nemimandla kwihlabathi liphela, kunye neemveliso zethu ezikhuphisanayo kunye nenkqubo yokusungula ejolise kwintengiso.
> Funda ngakumbi ngeGoldenlaser
Ilungelo lokushicilela ? 20052021 Wuhan Golden Laser Co. Ltd. Onke Amalungelo Agciniwe.